Amanye ama-Marche - I-World March
Ikhaya » Amanye amaMarches
Umhlaba wesibili Mashi 2-2018
Kusuka ngo-Okthoba 2, 2018 kuya kuMashi 8, 2019
Lapha ungathenga incwadi ye-2nd World March
I-American American March 2018
Kusuka ku-16 kusukela ngo-September kuya ku-13 kusukela ngo-Okthoba
La I-South American March for Peace and Nonviolence (MS) ihambele ngaphezulu kwamakhilomitha angu-11.500 ezinsukwini ze-28 nge- Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, EBolivia, eSuriname, eBrazil, e-Argentina y EChile.
Isenzo sakhuthazwa ngabashisholi besifazane benhlangano "Izwe elingenabo Ampi nobudlova"Isahluko sase-Ecuador owabamba iqhaza ku-Central American March ka-2017 njengababukeli bamazwe ngamazwe.
Leli qembu elincane lalixhuma nabashisekeli besuka kwamanye amadolobha I-Bogotá, Lima, Santiago, ushukela, Córdoba, Sao Paulo kancane kancane kwakhiwa inethiwekhi, ngaphandle kobunzima, nomzila, imicimbi, izinkulumo kanye neqembu lababambiqhaza ngaphakathi ithimba lesisekelo lokho kungenza lonke uhambo. Kamuva, abantu abaningi, izemvelo, izintatheli zezempi kanye nabangenasivikelo bajoyina, kanye nezinhlangano, amanyuvesi, izikole, omasipala kanye nabaqoqiwe abavela emazweni ahlukene, ndawonye, ​​okwenziwe ngoMashi.
Izishoshovu ezingamashumi ayisithupha ukusuka I-Pacific Corridor, phakathi kwalabo abahamba amaColombia amane enza uhambo oluphelele, bahlangana eSantiago de Chile nalabo abavela I-Atlantic Corridor kulesi sigaba sokugcina sikaMashi owahamba ezindaweni ezingamashumi amane nantathu, phakathi kwamadolobha nomasipala, lapho kwakhiwa khona imicimbi eminingi ekhuthaza ukuthula nokungahambi kahle.
Ulwazi oluphelele lungabonakala ku-WEB
Ungabona noma ulanda incwadi ye-South American March mahhala.
I-Central American March 2017
Kusukela ku-10 kusukela ngo-September kuya ku-16 kusukela ngo-September
I-protagonists ye- 1ª Central American March for Peace and Nonviolence (MC)Bagijima ngamakhilomitha angu-3.400 ezinsukwini ezingu-7.
Baba baningi khona nokumasha, izenzakalo, izingxoxo, imicimbi yamasiko kanye namaholide enziwa izindawo 10, kuhlanganise emadolobheni nabomasipala Honduras (Peña Blanca, San Pedro Sula futhi San Lorenzo), Guatemala (City ne Mixco), e-El Salvador (Sonsonate, San Salvador and San Miguel), Nicaragua (Borders), Panama futhi Costa Rica (San José futhi Heredia).
Abashayeli beqembu babeyizishoshovu ze-74, ikakhulukazi abafundi abasha, kodwa futhi nabantu abadala, kubandakanya ezinye izingane. Ngesikhathi sokuvakasha babehamba nabazingeli be-Ecuadorian njengababukeli bamazwe ngamazwe.
Isithunywa seCosta Ricans sathola emngceleni we I-Peñas Blancas kuya ku MC ephuma Nicaragua. Amahora kamuva I-1ª MC yokungabi nabuthakathi nokuthula befika enhloko-dolobha, I-San José Ku I-Campus Omar Dengo we I-National University yaseCosta Rica (UNA), zamukelwa ngamakhulu abafundi, izishoshovu kanye neziphathimandla zezemfundo Udokotela oDokotela U-Alberto Salom ekhanda.
Ukufika kwakhe kwavula Foro futhi i Izinsuku zeYunivesithi "Ukuvuselela Ukungabi Nesintu Nokuthula" ebibanjelwe ezinsukwini ezi-2 ezilandelayo, ngoSepthemba 14 no-15, 2017. Kwakuwumvuthwandaba womzamo omkhulu wabantu ababumbene abafike bacishe bakhathala, ikakhulukazi ngenxa yobunzima abahlangabezana nabo emasikweni nasekuweleni kwemingcele, ngokubuyekezwa okungapheli nezikhathi ezinde ukulinda, okwaholela ezimeni eziningi ekubambezelweni kwezenzo ezihleliwe. Kwaqinisekiswa ukuthi abanye ohulumeni esifundeni bakwenza kube nzima ukuthi abantu bahambe ngokukhululeka.
Isenzo sanyuswa yinhlangano "Izwe Ngaphandle Kwezimpi futhi ngaphandle kobudlova" I-Central America Isahluko futhi wabalwa ngokubambisana kwamanyuvesi amaningana, izikhungo kanye neziqoqo.
Incwadi ye-Central American March ingabonwa noma ilayishwe lapha mahhala.
Kusukela ku-2 ka-Okthoba kusuka ku-2009 kuya ku-2 ka-January ka-2010
Incwadi ye-1ª World March ingabonakala ku-intanethi lapha